what, when, why: समस्या
एक जना मान्छेलाई साह्रै समस्या परेर डक्टरको म गएछ ।
मान्छे: डक्टर साहेब मलाई साह्रै समस्या पर्‍यो ,मलाई बिर्सिने रोग लागेको छ , यो समस्याले गर्दा मलाई जिउन नै गार्हो भयो । केही उपाय बताइ दिनुस् ।
डक्टर : ठीक छ नाअतिनुस् म समस्या हल गर्न सक्छु मलाई यति भन्नुस् कि तपाईंलाई यो समस्या कहिले देखि भएको हो ??
मान्छे :हैन तपाईंले कुन समस्या भन्नु भएको ???